I-ITIL eqhubekayo yokuPhuthukiswa komSebenzi yokuThuthukiswa koMsebenzi - ITS
ITIL v3 Intermediate CSI (Ukuthuthukiswa Komsebenzi Okuqhubekayo)
I-ITIL v3 ephakathi kwe-CSI (Ukuqeqeshwa Okuqhubekayo Kwenkonzo) ku-gurgaon
I-ITIL v3 ephakathi kwe-CSI (Isevisi Yokuqhubekayo Yesevisi) ibiza izindleko eGurgaon
Isikhungo se-ITIL v3 esiphakathi CSI (Ukuthuthukiswa Komsebenzi Okuqhubekayo) ku-gurgaon
I-ITIL v3 ephakathi kwe-CSI (Ukuthuthukiswa Komsebenzi Okuqhubekayo) e-Gurgaon
I-ITIL v3 ephakathi kwe-CSI (Isevisi yokuThuthukiswa kokuSebenza) ku-gurgaon
I-ITIL v3 ephakathi kwe-CSI (Ukuqhubeka Okuthuthukiswa Komsebenzi) eGurgaon
Best ITIL v3 Intermediate CSI (Ukuthuthukiswa Komsebenzi Okuqhubekayo) Ukuqeqeshwa Ku-intanethi
I-ITIL v3 Intermediate Inter-Mediate CSI (Ukuqhubeka Nokuthuthukiswa Komsebenzi)
I-ITIL eqhubekayo yokuPhuthukiswa komSebenzi yokuPhuthukisa nokuQinisekisa
I-ITIL eqhubekayo yokuPhuthukiswa komSebenzi yokuPhuthukiswa koMsebenzi
Lesi sifundo sibonisa ukubuka konke okuphelele kwe-CSI kubandakanya yonke imisebenzi ehlobene nayo: ukuqhubeka nokuvumelanisa nezinsizakalo ze-IT ekushintsheni izidingo zebhizinisi ngokukhomba nokusebenzisa ukuthuthukiswa kwezinsizakalo ze-IT ezisekela izinqubo zebhizinisi. Lezi ziqu zibuyekeza imisebenzi yokwenza ngcono njengoba zisekela indlela ye-Lifecycle ngokusebenzisa iSikhungo Sezinsizakalo, Ukwenziwa Kwezinsizakalo, Ukuguqulwa Kwemisebenzi Nokusebenza Kwemisebenzi. Izitifiketi eziphakathi kwe-ITIL iyatholakala kunoma ubani oye wadlula ukuhlolwa kwe-ITIL Foundation. It isakhiwo modular nge module ngamunye enikeza ukugxila ezahlukene Ukuphathwa Kwesevisi ye-IT. Ungathatha iziqu ezimbalwa noma eziningi eziningi ezidingekayo njengoba udinga. Amamojula aphakathi angena emininingwaneni engaphezu kwesitifiketi seSisekelo, futhi anikeze isitifiketi esaziwa embonini. Izitifiketi eziphakathi kwe-ITIL zihlukaniswe ngezigaba ezimbili -I-Lifecycle yesevisifuthiAmandla enkonzo. Abanye bangase bafise ukugxila kwiqoqo elilodwa lamamodyuli, kodwa ungakhetha ukukhetha amamojula kusuka kokubili imifudlana ye-Service Lifecycle and Service Capability ukuze kuhlanganiswe ukuphathwa nolwazi lobuchwepheshe. Kunconywa ukuba ube nokuchayeka kwangaphambili emibonweni eyisisekelo ku-IT futhi okungenani ubufakazi obuneminyaka emibili yobuchwepheshe osebenza ku-IT Service Management ngaphambi kokusebenzisa noma iyiphi yamamojula we-ITIL Intermediary.
Ukusakaza kwe-Service Lifecycle kugxile kwimikhuba ye-ITIL® ngaphakathi kokuqukethwe kwe-Service Lifecycle. Okugxilwe ngokuyinhloko yi-Lifecycle ngokwayo kanye nezinqubo nezinqubo zokusebenza ezisebenzisayo ngaphakathi.
Ukusakazwa koMsebenzi wezokuSebenza kulabo abafisa ukuthola ukuqonda okujulile kwezinqubo ezithile ze-ITIL® nezindima. Ukugxila okuyinhloko kumisebenzi yenqubo, inqubo yokusebenza nokusetshenziswa kulo lonke i-IT Service Lifecycle.
Izilaleli ezihloselweI-ITIL Ephakathi Nesevisi Yokuthuthukisa Isitifiketi Esiqhubekayo
Ama-Chief Information Officers (ama-CIOs)
I-Chief Technology Officers (i-CTOs)
Abaphathi be-IT Audit
Abaphathi bezokuphepha be-IT
Abafundi abafisa ukuqeqeshwa futhi bahlolwe ngalezi ziqu kumele basebenze isitifiketi se-ITIL Foundation ku-IT Service Management okufanele sinikezwe njengobufakazi bokubhala ukuze bathole ukungena
Abafundi abamba iziqu ezilandelayo ze-ITIL nabo bayakufaneleka, futhi ubufakazi obufanayo buzodingeka:
• Ngaphambilini ITIL (V2) Foundation plus Foundation Bridge
• Isitifiketi se-ITIL seSitatimende Sokuphathwa Kwezisebenzi ze-IT (okufeziwe ngeMphathi Wenkonzo noma imizila yokudonsa)
Izindlela namasu we-CSI
Izinselelo, izici eziphumelelayo eziphumelelayo nezingozi
Ukuqeqesha ekilasini I-Gurgaon 2 Days Bhalisa manje
Ukuthuthukiswa Komsebenzi Okuqhubekayo we-ITIL (i-CSI - 22Nthemba ngo-September 2018)
I-innovative Technology Solutions iqhuba izinsuku ezingu-2 Ukuqeqeshwa ku-ITIL Ephakathi Kokuthuthukiswa Kwesevisi Okuqhubekayo kusukela ngo-XNUMNyakatho Septemba 22 kuya ku-2018rd September 23
Inombolo yemibuzo: Imibuzo ye-8 ephepheni
Ubude besikhathi: Amaminithi we-90 kubo bonke abazobhalwa ngolimi lwabo
Amaphuzu Okudlula: Amamaki angu-28 adingekayo ukudlula (ngaphandle kwe-40 atholakalayo) - 70%
Ifomethi yokuhlola: Choice multiple
Ukuze uthole olunye ulwazi thintane nathi ngomusa.